Radio Don Bosco - Manameloka ny favanakavahana i Papa François
Manameloka ny favanakavahana i Papa François
Naseho ny : 4 jona 2020
Manameloka ny endri-panavakavahana rehetra ary nananatra ny mponina any Etazonia noho ny fisian’ny herisetra izay manimba ny rehetra i Papa François tamin’ny “Audience Générale” notanterahany tao amin’ny lapa apôstôlikan’i Vatican, omaly.
Manahy ny ho vokatry ny herisetra izay miha mahazo vahana taorian’ny nahafaty an’i George Floyd, ny alatsinainy 25 mai teo, izy. Tsy azo ekena, hoy ny Papa, ary tsy azo hodian-tsy hita ny endri-panavahana sy fanilikilihana ka sahy hilaza fa masina ny ain’olombelona. Tsy misy zavatra azo amin’ny herisetra, hoy hatrany izy, fa vao maika fahavoazana aza no aterak’izany. Naneho ny fiombonam-pony amin’ny Eglizy ao Minneapolis sy Etazonia manontolo ny Papa manoloana izao herisetra izao ary nivavaka ho an’ny fialan-tsasatry ny fanahin’i George Floyd sy ireo rehetra namoy ny ainy vokatry ny fanavakavahana. Nivavaka ho fankaherezana ny fianakavian’izy ireo koa sy ho an’ny fihavanam-pirenena hisian’ny fiadanana.